I-Semalt ichaza Izinzuzo Eziyinhloko Zokususa Amabhizinisi Amancane
Inkampani encane ingadinga imisebenzi engaphansi kwenkontileka noma ezinye izingxenye zebhizinisiukusebenza kumhlinzeki wezinsizakalo zebhizinisi lesithathu. Uma unquma ukuthumela abanyeeminye imithwalo yemfanelo eqenjini elisezweni langaphandle, elibhekiswe kuwonjengokukhishwa kwe-offshore. Namuhla, ngenhloso yokwehlisa izindleko zokusebenza kwebhizinisi, eziningiAmabhizinisi amancane akhetha ukukhipha imali esikhundleni sokuqashwa komsebenzi - mobile application development websites.UMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, ilandisaizinzuzo eziyinhloko zokukhishwa kwebhizinisi elincane.
Hambisa kusuka ekugxilweni kuya ezindabeni eziguquguqukayo. Isibonelo, une-akhawunti ye-onsite.Uzodinga idesksi, ikhompiyutha, umshuwalense wezempilo, itiye, kanye nomholo wenyanga,futhi nokho njengesiqalo sokuqala, kungenzeka kube nomsebenzi omkhulu kubo bonke abasebenzi ekuqaleni.Ukuqeda ukuxazulula ukuxazululula lokho kuyinkinga kuwe. Uma uphumelela ukubalwa kwebhizinisi lakhoimithwalo yemfanelo, ukhokhela imali eyodwa yesikhathi somsebenzi okwenziwe, awudingi ukuhlinzekaizinsiza futhi, eqinisweni, uthola umsebenzi ongcono kakhulu ngoba ukhokhela umsebenzikwenziwa ngokuphelele. Ngisho noma imisebenzi oyikhiphayo ephindaphinda, unganjalo uqashe umuntu ohlukile esikhathini esizayo.
Thola isikhathi esengeziwe sohlu lebhizinisi lwezinto. Abanikazi bebhizinisibangabi nesikhathi sangempela sokunakekelwa ohlangothini lobuchwepheshe baboibhizinisi. Lokhu kuhlanganisa izinto ezifana nomklamo wewebhu, ukumaketha kokuqukethwe, i-SEOnokuningi okuningi. Ngokukhipha lezi zimfanelo, uzotholaisikhathi esiningi ezandleni zakho ukuze unakekele ibhizinisi ngokwayo. Gxila kwakhoqaphela ukwaneliseka kwamakhasimende futhi uvumele abanye abantu benze lobuchwephesheimisebenzi yakho.
Finyelela ekuthuthukisweni kwezinga elifana nabadlali bemboni enkulusebenzisa. Abadlali bemikhiqizo emikhulu ku-niche yakho bangakwazi ukuhlala endliniisixuku se talenta, futhi lokho kuzobabeka ngaphambi kwakho. Ngeke ukwaziukukwazi ukuthola ithalente yangaphakathi. Ukusebenzisa ngokuphishekela kwakho kukunika ithubaqasha ithalenta ephezulu ngezindleko eziphansi hhayi kuphela ezweni lakini kodwa kusuka phesheyakanjalo. Njengoba lokhu kungeke kube yindleko eqondile, uzokwazi ukulondoloza imali.
Gxila emithonjeni yabantu lapho kudingeka khona. Ukuqasha nokuqeqeshaabasebenzi bayabiza. Ukuba yisiqalo, umsebenzi wakho webhizinisi cishe kakhuluuzohlala nawe isikhathi esifushane, futhi lokhu kusho ukuthi abasebenziwena oqeqeshwe ngezindleko ungase uqale ukusebenza komunye umuntu. Ukugwemakonke lokhu kunzima kokuqasha, ukuqeqesha nokuthumela, vele uvumeleUkukhishwa kwemisebenzi kuyenzela umsebenzi.
Nciphise izindleko zemikhiqizo namasevisi wakho. Iqiniso liyiqinisoukuthi ukuthengiswa kungabizi futhi ngesikhathi esifanayo, uthola eliphezuluumsebenzi owenziwe. Kuyinto eshibhile kakhulu kunalokho lapho kufanele wenze ucwaningoukuthuthukiswa komkhiqizo, ukumaketha, ukusabalalisa nokudiliza ibhizinisi lakho.Izindleko zokusebenzisa ibhizinisi eliphezulu zibiza amanani aphezulu wemikhiqizo yakho,ngakho kuzodingeka udlulisele izindleko phansi kumakhasimende akho.
Ekugcineni, ukukhipha imali kulula. Ukukhipha imisebenzi yebhizinisi njengevidiyoukuhlela, ukumaketha, ukuphathwa kwezindaba zenhlalo, ukuthuthukiswa kokuqukethwe kanyeokuningi kulula kakhulu. Ngaphakathi i-Semalt Amasevisi weDividal, ungathola abanolwaziochwepheshe bemboni bazimisele ukwenza umsebenzi omuhle kakhulu kuwe. Amaklayenti ethu anakhoyafakazela ukuthi ukusebenza okunjalo kusebenza kahle, ngakho-ke kusukela manje kuya phambiliujabulele lezi zinzuzo futhi.